“Qurbajoogta Somaliland Ee UK Oo Fariin U Soo Diray Codbixiyayaasha, Si Midaysana U Taageeray Musharixiinta KULMIYE” | FooreNews
Home wararka “Qurbajoogta Somaliland Ee UK Oo Fariin U Soo Diray Codbixiyayaasha, Si Midaysana U Taageeray Musharixiinta KULMIYE”
“Qurbajoogta Somaliland Ee UK Oo Fariin U Soo Diray Codbixiyayaasha, Si Midaysana U Taageeray Musharixiinta KULMIYE”
FoorenewsOct 31, 2017wararka0
London (Foore)- Kulan aad u balaadhan oo ay soo qaban qabanqaabiyeen qurbajoogta Somaliland ee dalka UK ayaa xalay (28.10.2017) lagu qabtay magaaladda London. Kulankan oo ay ka soo qaybgaleen aqoonyahano, waxgarad iyo dhamaan qaybaha kala duwan ee bulshadda ayaa waxay fariin dhawr qodob ah u soo direen bulshadda Somaliland. Sidaas oo kale waxaa kulanka lagu sii sagootiyey wafti culus oo u safar ugu soo baxaya Somaliland si ay uga qayb qaataan sidii uu xisbiga KULMIYE ugu guulaysan lahaa doorashadda madaxtooyadda Somaliland ee dhawaan dhici doonta.
Baaqaas oo dhamaystirani waxa uu u qornaa sidan:
“Sida aad ka warqabtaan,13-ka bisha November 2017-ka bulshadda Somaliland waxay u dareeri doonaan sidii ay u soo dooran lahaayeen madaxweynaha Somaliland hogaamin doona shanta sanno ee soo socota.
Waxaanu rajaynaynaa in doorasho wanaagsan oo xor iyo xalaal ahi inoo dhacdo insha Allah.
Guud ahaan, waxaanu ugu baaqaynaa qaybaha kala duwan ee bulshadda Somaliland inay ku codeeyaan si nabadgelyo ah. Sidaas oo kale waxaanu ugu baaqaynaa xisbiyadda qaranka , guddida doorashooyinka qaranka iyo madax dhaqameedka in la ilaaliyo hanaanka doorashadda , lana dhawro shuruucda iyo xeerarka dalka iyo kuwa doorashaddaba. Si la mid ah sidaas, waxaanu jecelnahay inaanu fariin u diro bulshadda codka bixinaysa ee madaxweynaha dooranaysa,
• Doorashaddan waxaa ku tartamaya saddex musharax oo reer Somaliland ah oo midkood uu codkaaga ku noqon doono madaxweynaha Somaliland.
• Mudane muwaadin waxay masuuliyaddi kaa saaran tahay inaad doorato hogaamiye leh hiigsi iyo hiraal, kuna haboon marxallada Somaliland ay maanta marayso.
• Mudane muwaadin, waxaa haboon inaad tixgeliso wakhtiga ay Somaliland ku jirto iyo duruufaha inagu xeeran ee amni, dhaqaale iyo siyaasadeed-ba si aad u kala dooratid saddexda musharax ee u tartamaya hogaanka dalka.
• Somaliland waxay guulaysanaysaa marka muwaadiniinteedu u codeeyaan si muwaadinimo leh , musharixiintana lagu kala doorto barnaamijyadda xisbiyadda qaranka iyo qorshahooda, iyo doodii musharixiinta madaxweynaha ee la qabtay 19-ka October 2017 taas oo waxbadan iftiimisay.
• Dhanka kale, waxaanu aaminsanahay inay muhiim tahay in la tixgeliyo kartidda iyo taariikhda saddexda musharax ee la xidhiidha halgankii , nabadayntii iyo dib u dhiskii dalka ee aan lagu kala dooran qabiilka iyo goboladda ay ka soo jeedaan.
• Markii aanu tixgelinay qodobadda kor ku xusan, una kuur galnay xoggogaalnimadda musharixiinta ee xaaladda dalka, duruufaha jira iyo sidda looga bixi karo-ba.
Waxaanu ku qanacnay una soo jeedinaynaa bulshadda Somaliland,kulana talinaynaa inay doortaan oo ay codka siiyaan musharaxa jagadda madaxweyne ee xisbiga KULMIYE mudane Muuse Biixi Cabdi iyo ku xigeenkiisa mudane C/raxmaan C.lahi Ismaaciil (saylici) oo aanu u aragno inay ku haboon yihiin hogaaminta dalka.
Gebo gabaddii , waxaanu marlabaad ugu baaqaynaa shacbiga Somaliland inay ku dedaalaan sidii Somaliland ay ugu dhici lahayd doorasho wanaagsan iyo sidii ay musharixiintaasi u hanan lahaayeen hogaanka dalka.
Previous PostXisbiga WADDANI Oo Jawaab Ka Bixiyay Hadalkii Calaacalka Ahaa Ee Ka Soo Yeedhay Afhayeenka KULMIYE Next PostISIS Oo Sii Ballaadhisay In Ay Cabsi Galiso Dadka Isu Diyaarinaya Ka Qayb Galka Koobka Adduunka - Sawirka Muujinaya Laacinka Brazil Ee Neymar Ay Markan Isticmaaleen